Talaabo ay qaaday gabadha filimada soo saarto Ekta Kapoor oo ka careysiisay Salman Khan – Filimside.net
Talaabo ay qaaday gabadha filimada soo saarto Ekta Kapoor oo ka careysiisay Salman Khan
March 12, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Jeetendra gabadhiisa Ekta Kapoor sidoo kalena la dhalatay Tushar Kapoor waa gabbar filimada maal galiso waxayna leedahay shirkada caanka ah Balaji Motion Pictures.
Ekta Kapoor waxay ku dhawaaqday inay maal galineyso filimka Mental Hai Kya waxaana hogaamiyaal ka ah Kangana Ranaut iyo Rajkumar Rao waana filim cabsi, qayaano iyo arimaha dhimirka maskaxda isugu jiraan.
Salman Khan ayaa ka carooday in Ekta Kapoor filimkeeda u bixisay Mental Hai Kya sababtoo ah Salman iyo walaalkiis Sohail Khan magaca Mental iyaga ayaa xuquuq ahaan iska leh waxayna la rabeen inay filimkoodii Jai Ho u bixiyaan.
Sohail Khan wuxuu yiri “Waan ka xunahay Ekta Kapoor ayadoon na weydiisanin ayay magaceena Mental adeegsatay” waana talaabo qaldan inay sidaas sameyso.
Salman Khan ayaa ku mashquulsan duubista filimkiisa Race 3 jadwalka ugu dambeeyo ee magaalada Dubai lagu duubayo wuxuuna Sohail la wadaagay sida uu kaga careesan yahay in Ekta Kapoor magaca Mental fasax la’aan adeegsatay.
Lama ogo talaabada xigta ee Sohail Khan iyo Salman Khan qaadi doonaan inay Ekta Kapoor dacweyn doonaan ama inay Ekta qoyskan lasoo xariiri doonto si toosna ah magaca Mental adeesgigiisa u weydiisan doonto.
Waxaa Aqrisay 1,241